Xiddiga madow moonstone macnaha iyo sifooyinka - video
Xiddiga madoow ee moonstone micnaha iyo sifooyinka.
Dukaankeena ku iibso moonstone xiddig madow oo dabiici ah
Black moonstone waa sodium potassium aluminium silicate leh caanaha kiimikada (Na, K) AlSi3O8 waxayna ka tirsan tahay kooxda feldspar.
Magaciisu wuxuu ka yimaadaa saameyn muuqaal ah, ama sheen, sababtuna tahay kala-soocidda iftiinka ee qaab dhismeed yar oo ka kooban lakab joogta ah (lamellae).
Waxaan u adeegsanay dayax gacmeed dahabka dahabka kumanaan, oo ay ku jiraan ilbaxnimadii hore. Roomaanku aad bay u jeclaayeen dhagaxan, maadaama ay aamminsan yihiin inay ka dhalatay raaxo adag oo Dayax. Labada Roomaan iyo Griig labadaba waxay laxiriiraan dayax gacmeedyada iyo ilaahyadooda dayaxa. Taariikhda dambe ee ugu dambeysay. Waxay caan noqotay muddadii Art Nouveau. Dahabka dahabiga ah ee reer France René Lalique iyo waliba kuwa kale oo badan ayaa sameeyay dahab aad u tiro badan adoo adeegsanaya dhagaxan.
Dayax-gacmeedka ugu caansan wuxuu ka kooban yahay macdanta "adularia" ee macdanta loo yaqaan 'macdanta' adularia ', oo loogu magac-daray goob macdanta laga qodo hore ee u dhow Mt. Adular oo ku taal Switzerland, hadda waa magaalada St. Gotthard. Plagioclase feldspar oligoclase sidoo kale waxay soo saartaa muunadaha dhagaxa. Waa feldspar leh luul buluug ah iyo ruug cadaa. Magaca kale waa hektarolite.
Orthoclase iyo albite
Black moonstone wuxuu ka kooban yahay laba nooc oo feldspar ah, orthoclase iyo albic. Labada nooc ayaa la isku duubay. Kadibna, sida macdanta casriga ah ee cusub ee la qaboojiyo, isku xirka orthoclase iyo albit kala gedisan oo la gooyey, lakabyo kale.
Adularescence waa ifafaale sheen buluug ah oo ka tarjumaya dusha sare ee cabochon ee moonstone xiddig madow. Ifafaalaha shimmer wuxuu ka yimaadaa isdhexgalka iftiinka oo leh lakab ka kooban kareemooyin "albite" yar oo ku jira moonstones. In kasta oo dhumucda lakabka kristantarradan yaryar ay go'aaminayaan tayada shimmer buluug ah. Sidaa darteed, khafiifinta lakabka, ayaa sifiican uga fiican flash-ka buluuga ah. Tani waxay badanaa u muuqataa inay tahay saameyn iftiin leh oo billow ah.
Kaydinta moonstone waxay ka dhacdaa Armenia (badanaa laga bilaabo Lake Sevan), sidoo kale Australia, Alps-ka Austrian, Mexico, Madagascar, Myanmar, Norway, Poland, India, Sri Lanka iyo Mareykanka.
Intaas waxaa sii dheer, moonstone waa Florida State Gemstone (USA). Waxaa loo qoondeeyay sida oo kale in lagu xuso Dayax-gacmeedyada, oo ka kacay Xarunta Hawada ee Kennedy. In kasta oo ay tahay Gemstone State Gemstone, hadana si dabiici ah ugama dhacdo gobolka.
Feldspars waa koox ka samaysan macdano tectosilicate ah oo sameeya qiyaastii 41% cufka qaaradda ee miisaanka.
Waxay ka dhalaali kartaa magma sida xididada labada dhagaxyada dabaysha iyo dhagxaanta aan haynin iyo sidoo kale ay ku jiraan noocyo badan oo ah dhagax metamorphic ah.
Xiddiga madoow ee moonstone micnaha iyo sifooyinka
Dhagaxu wuxuu leeyahay awood xoogan oo kaa caawiya inaad ku xirnaato dumarka rabbaaniga ah inta lagu jiro fekerka. Sida kristantarrada quruxda badan ee loo yaqaan 'moonstone crystals' waxay ka dhex muuqdaan chakras-ka ugu sarreeya, taas oo ka caawin karta horumarinta hadiyadaha maskaxda. Gariirkoodu wuxuu wax ku ool ka yahay gudaha sacral ama xudunta chakra si looga caawiyo soo bixitaanka fikradaha cusub iyo kuwa cusub.
Dayax madoobaadka madow ee ku shaqeeya mikroskoob
Labradorite ma la mid yahay moonstone madow?
Labradorite waxaa loo kala qaadey inuu yahay plagioclase iyo calcium sodium feldspar. Moonstone waa orthoclase iyo potassium sodium feldspar. Taasi waa sababta moonstone iyo labradorite ay u yihiin dhagaxyo walaashiis ah. waa isku reer laakiin gemologically ahaan way ku kala duwan yihiin.
Ma moondon madow waa dhif?
Waa dhif iyo naadir sababta oo ah sida ay ku timaado iyo meesha aad ka heli karto. Dayax-madoobaadka madow waa midka ugu dhifka yar dhammaan bilaha dayaxa sida bilaha qaanso roobaad iyo kan dayaxa cad.
Sidee ku ogaan kartaa haddii moonstone xiddigta madow ay dhab tahay?
Adularescence waa, sida habboon, inuu buluug noqdo. Sheenku waa inuu ka muuqdaa iftiinka dusha sare ee cabochon, waana in si fudud looga arkaa xaglo ballaadhan oo ballaadhan.
Ka iibso moonstone xiddig madow oo dabiici ah dukaankeenna qaaliga ah
Tags Ruby, xiddiga